ल्होछार हाम्रो नयाँ वर्ष मात्रै हैन : अजितमान तामाङ(भिडियोसहित) – NamoBuddha Khabar
ल्होछार हाम्रो नयाँ वर्ष मात्रै हैन : अजितमान तामाङ(भिडियोसहित)
मंगलबार, माघ १८, २०७८ | २२:१६:०३ |
नेपालका आदिवासी जनजाति तामाङ लगायतका जातजातिले सोनाम ल्होछार भव्यताका साथ मनाईरहेका छन् । चन्द्रपात्रो अनुसार मनाईने यो ल्होछार यो पटक माघ १९ गते परेको छ । सरकारले सार्वजनिक विदा घोषणा गरिसकेको छ । नेपालमा यो सांस्कृतिक पुर्नजागरणको रुपमा पनि मनाईने गरेको छ । कतिले यो नयाँ वर्ष मात्रै हो भन्ने गरेका छन् । संस्कृतिविद् अजितमान तामाङ ल्होछारको व्यापकतामाथि दावी गर्नुहुन्छ । उहाँका अनुसार यसको ऐतिहासीक,धार्मिक,सांस्कृतिक,पुरातात्विक महत्व छन् । त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ ‘यो ल्होछार हाम्रो नयाँ वर्ष मात्रै हैन,सांस्कृतिक पहिचानका लागि महत्वपूर्ण कडी हो,बौद्ध सम्पदाको धरोहर हो ।’ उहाँ सोनाम ल्होछार स्थापीत अभियानका अभियन्तामध्ये एक हुनुहन्छ । नमोबुद्ध खबर डट कमका लागि नेपाल तामाङ घेदुङका उपाध्यक्ष समेत रहनुभएका संस्कृतिविद् तामाङसँग गरिएको अन्तरवार्ता यहाँ भिडियोका साथै लिपिवद्ध रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
विभिन्न ल्होछारहरु छन् । हामीले सोनाम ल्होछार भनेका छौं । सोनाम ल्होछार तामाङले मनाउनुपर्ने हो भनेर तामाङ घेदुङमार्फत र स्वतन्त्र अभियन्ताको रुपमा समेत तपाई जोडिनुभएको छ । भन्नुहोस् न सोनाम ल्होछार नै कसरी तामाङको हो ?
पहिल्यैदेखि तामाङहरुमा साल माघमा फेरिन्छ भनेर भन्ने गरिन्थे । चन्द्र महिना अनुसार अर्थात चन्द्रपात्रो अनुसार माघ शुक्ला प्रतिपदाका दिनदेखि साल फेरिन्छ । तामाङहरुले भनेको पनि यहि हो । माघ शुक्ला प्रतिपदा,यो भनेको चन्द्र माघ महिनाको पहिलो दिन भनेको हो । यो एउटा पात्रोको कुरा रह्यो ।
हाम्रो तामाङले मान्दै आएको ल्होछार यहि हो भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । अर्को कुराचाहिं हामी तामाङले परापूर्वकलदेखि नै ल्होछार मान्दै आएको यो नेपाल देशमा काठमाडौंमा नै हेर्ने हो भने स्वयम्भूको वज्रमूनि ल्होखोर च्युङ्नीमा त्यसमा सुंगुर वर्ष(वर्ग) उल्लेख छ,त्यसैले पनि फग्पा सिंगुन भनेर भन्ने गरिन्छ ।
स्वयम्भू फाग अर्थात सुंगुर वर्षमा बनाएको भनेर प्रमाण भेटिन्छ । त्यसैगरी तामाङहरु धेरै बस्दै आएको बौद्ध,झ्यारोङ खस्योर । त्यो भनेको झ्या अर्थात चरा वर्षमा बौद्ध बनाएको भनेर भन्दै आएको छ । अर्कोचाहिं हाम्रो मलमास अधिकमासचाहिं पुष महिनामा थपेर पात्रो बनाउने प्रचलन कसको हो भन्दा चांगुनारायणको अभिलेखमा पनि यहि कुरा छ । यसले गर्दा तामाङले मनाउदै आएको ल्होछारको पात्रोबाट नेपालमा परापूर्वकालदेखिनै हामीले मान्दै आएको भन्ने कुरा,यो माघमा वर्ष फेरिन्छ भन्ने कुरा,यो चन्द्र माघ महिनाको शुक्ल पक्ष भन्ने कुरालाई यो तीनवटा ऐतिहासीक,पुरातात्विक कुराहरुले समेत पुष्टि गरेको छ ।
अर्को कुरा के छ भने तामाङहरुको उत्पत्ति स्थल खोज्दै जांदा कतिले अहिले भोट भनेर भनेका छन् । हजारौं वर्षअघि त्यो पनि हो । भोटभन्दा पहिला कहां हो भन्दा चीन । चीनमा पनि हामीले मनाएको बेला नै यो ल्होछार मनाउदै त्यहां पनि हामीले परम्परागत रुपमा जसरी मनाउदै आयौं,त्यसरी नै मनाउने गरेका छन् । हामी तामाङहरुले मनाउदै आएको यो ल्होछार तामाङहरुले मात्रै नभएर ह्योल्मो,दुरा,डोल्पो,मनाङथेनहरुले समेत मनाउदै आएका छन् । पछि यो ल्होछारको नाम सोनाम ल्होछार भनेर राखियो । त्यो हुनाले हामी तामाङहरुको ल्होछार परापूर्वकाल देखि आजसम्म मनाउदै आएको कुरा यो दुई तीनवटा प्रमाणहरुले पुष्टि गर्दछ ।
यो एउटा सांस्कृतिक जागरण पनि देखियो । २०४६/०४७ सालको परिवर्तनअघि हाम्रा यो कुरा अलि ओझेलमा परेजस्तो तर जनजीवनमा सुनेको,कतै अवलम्वन गरेजस्तो देखियो । यो बीचको समय व्यवहारिक रुपमा खुल्लारुपमा मनाउने स्थिति किन रहेन ?
यो खास गरेर ४६ साल पहिलेसम्म हामी पञ्चायती व्यवस्थामा थियौं,त्यो पहिले १०४ वर्ष लामो राणाशासन थियो । राणाशासनपूर्व पनि गोर्खालीहरुको शासन खास थियो,अहिले एकथरीले भन्दा एकिकरण भनेर भन्ने गरिन्छ । वास्तवमा त्यो एकिकरण थिएन,किन भने पृथ्वीनारायण शाहले सबै त्यो राज्यहरु,देशहरुलाई उपनिवेशिकरण गरेका हुन् । उनकै समकालिन हेर्ने हो भने भारतमा व्रिटिश कोलनी, अरु ठाउंमा फ्रेन्च कोलनी,जर्मन कोलनी,पुर्तिगिज् कोलनी,हङकङ लगायत थुप्रै ठाउंमा कोलनिजम्को ट्रेण्ड थियो ।
पृथ्वीनरायण शाहले गरेको कोलनिजम्ले गर्दा त्यो बेलादेखि २०४६ सालको पञ्चायतकालसम्म हामी आदिवासी जनजातिहरु भनौं या तामाङहरुलाई आफ्नो कुरा,आफ्नो संस्कृतिको कुरा मान्न भन्न उनिहरुले दिएका थिएनन् । ४६ सालको चैत,४७ सालदेखि वहुदलिय प्रजातन्त्र आएपछि हाम्रो कुरा राख्न मान्न पाउने भयौं । २०४८ सालदेखि नेपाल तामाङ घेदुङ । ४६ सालको चैतमा नेपाल तामाङ बौद्ध घेदुङ भनेर बनाएका थियौं । किनभने त्यो बेला बौद्ध भन्ने वित्तिकै गौतमबुद्ध जन्मीएको देश भनेर बौद्ध संघसंस्था खोल्न पाइन्थ्यो । त्यसैले त्यो बेला नेपाल तामाङ बौद्ध घेदुङ बनायौं । ४७ सालको बहुदलीय व्यवस्था आएपछि बौद्ध शब्द छोडेर नेपाल तामाङ घेदुङ भनेर विशुद्ध रुपमा जातिय संस्था ।
जातिय संस्था भएपनि यो हाम्रो अधिकार व्यवस्थाका कुरा समेत राखेर यो घेदुङ बनायौं । त्यसपछि के भयो भने ४८ सालमा जनजाति महासंघ खोलियो । तामाङ घेदुङकै अगुवाईमा भएको हो । त्यो बेलादेखि अब हामीले हाम्रो भाषामा,लिपीमा पनि पठनपाठन गर्न पाईने भनेर त्यो बेलाको संविधानमा आयो । हाम्रा राष्ट्रिय भाषाहरु भनेर हाम्रा भाषाहरु राख्न सफल भयौं । त्यसको २ वर्षपछि २०५१ सालमा ल्होछारका लागि मनमोहन अधिकारी सरकारले सार्वजनिक विदा दियो । यसले गर्दा यो सांस्कृतिक पुर्नजागरण भनेको २०४६ सालको बहुदलिय व्यवस्था आएपछि जनताले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार पाए । त्यो पहिले पाइदैनथ्यो । तामाङको कुरा गर्यो भने यो साम्प्रदायिक भनेर धरपकड गर्ने,जेल हाल्ने गथ्र्यो राज्यले । ४७ सालको नयां संविधान जारी भएपछि हाम्रो अधिकार पाएकोले यो हाम्रो ल्होछार पनि खुल्ला भयो । यो परिवेशमा २०५१ सालदेखि राज्यले नै स्वीकार गरेको होनि ।
४८ सालमा हामीले अभियान सुरु गर्यौं । ४९,५०,५१ यो चौथो वर्षपछि त राज्यले नै मान्यता दियो । नेवारहरुको ल्होछारलाई त हामीलाई भन्दा पछि मान्यता दिएको हो । त्यसपछि त शेर्पाको ग्याल्बो ल्होछारलाई पनि मान्यता दियो । गुरुङको तोला ल्होछार पुष १५ लाई पनि मान्यता दियो । माघीलाई पनि मान्यता दियो । हाम्रो सांस्कृतिक पुर्नजागरणको काम वास्तवमा नेपालमा तामाङ घेदुङबाट सुरुवात भएको हो । हामी सबै मिलेर जनजातीहरुलाई प्रोत्साहन दिने काम भयो भनेर भन्दा हुन्छ ।
ल्होछार भन्नेवित्तिकै सांस्कृतिक,धार्मिक,ऐतिहासीक पाटोहरु जोडिएला । नयाँ वर्ष सुरुवात भएको मात्रै हो,खास पर्व नै हैन भन्ने जस्ता कुराहरु पनि आउन थालेको छ । यो ल्होछार हाम्रो पर्व नै हो,हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानका लागि महत्वपूर्ण कडी हो भनेर कसरी भन्न सकिन्छ ?
यो ल्होछार हाम्रो नयाँ वर्ष मात्रै हैन । सांस्कृतिक रुपमा सम्बन्धहरु छन् । ल्होछार पर्वसंग परापूर्वकालदेखिको केराप,ठुङराप,दोङराप यसैमा जोडिएर आउछ । अहिले पनि सांस्कृतिक रुपमा,धार्मिक रुपमा ऐतिहासिक र पुरातात्विक दृष्टिकोणले हेर्दापनि हाम्रो यो ल्होछारको महत्व देखिन्छ । जस्तै एउटा ऐतिहासीकता के हो भन्दा अहिले पनि हामीले भन्दै आएको झ्यारोङ खस्योर अर्थात बौद्ध,हामीले मान्दै आएको फाबा सिंगोन अर्थात स्वयम्भू । हाम्रो इतिहासका कुराहरु खोज्ने हो भने कहिलेदेखि यो ल्होछार भन्दा ५ हजार वर्षभन्दा पहिले । ५ हजार वर्ष पहिले कहांबाट भन्दा चीनबाट ।
चीनमा तामाङ थिए थिएनन् भन्दा त्यसका प्रमाणहरु छन् । यो मोक्तान वंशावली भन्ने पुस्तकमा हामीले म्हेम्हेदाङ भन्ने हेर्यौं भने जेगोक जेनिङ ह्वाङ्गो खोर्सो ह्युल(देश)मा पूर्खा जंगै जराल भन्ने पूर्खाको नाम यहां राखेर चीन देशसम्म हाम्रो ऐतिहासीक सम्बन्ध जोड्ने काम केले गर्यो ? भन्दा यहि ल्होछारले हो । यो ल्होछारको पहिचान अथवा संस्कृति त्यो गान्सु(पहेंलो) नदिकै आसपासबाट सुरुवात भएको देखिन्छ । यसमा ऐतिहासीक सम्बन्ध छ । अर्को धार्मिक रुपमा हाम्रो स्वयम्भू,बौद्धको नाम,त्यो बनाको समय,नाम यो ल्होछारसंग अथवा ल्होखोर च्युङनीको कुरा त्यहां छ ।
यो त बौद्ध सम्पदा हो । बौद्ध ऐतिहासीक धरोहर हो । पुरातात्विक सम्पदा हो भने यो हाम्रो धार्मिक र ऐतिहासीक रुपमा पनि यसको महत्व देखिन्छ । अर्को कुरा के हो भने यो ल्होछारको ल्होखोर च्युङनी यो १२ वटा जीवजन्तु कसरी राखियो भन्ने बौद्ध धर्ममा चलेको कुराअनुसार पहिला बुद्ध भगवान,सिदार्थ गौतमभन्दा पहिलेपनि बुद्ध भगवान थिए । संसारका सबै प्राणीहरुलाई म अब निर्वाण प्राप्त गरेर विदा हुन लागेको सबै आउनु है भनेर भन्दाखेरी भगवानको नजिक को पहिले आए भन्दा छाङ्मा भन्दा पहिले जिवा भनेर मुसा आए,त्यसपछि मात्रै लाङ भनेर गोरु आइपुगेछ । त्यसैगरी बाघचाहिं कहिले भन्दा तेस्रोमा मात्रै । यो कसरी भयो भन्दा इतिहास हेर्दा भगवानले बोलाउंदाखेरी पहिले पुग्ने मुसा भयो,त्यसपछि गोरु भयो,त्यसपछि ह्योअी भनेको हामीले विरालो भनेको,अंग्रेजीमा र्यापीट भन्ने छ ।
१२ वटा जीवजन्तुहरुमा विरालो हुन्न भन्ने कुरापनि किन आयो त भन्दा चीनको यल्लो रिभर पहेंलो नदि तरेर आउंदा मुसालाई गाह्रो भयो,गोरुले मुसा र विरालोलाई के भने भन्दा मेरो ढाडमा बस म तारिदिन्छु । नदिको बीचमा पुग्दा मुसाले विरालोलाई धकेलिदिएछ,विरालो खस्यो । मुसा गोरुको ढाड चढेर उफ्रेर ओर्लिदा भगवानको सामु पहिला पुग्यो । गोरुचाहिं पछि पुग्यो भनेर मुसापछि गोरु ।
विरालोचाहिं नदिमा खसेका कारण ढिला पुगेर क्रममा पछि पर्यो भन्ने छ । बद्ध भगवानसंग जोडिएका कथाअनुसार यो १२ वटा जीवजन्तुभएको ल्होखोर च्युङनी उत्पतिको कथासमेत यहां भएकोले यो धार्मिक रुपमा पनि हाम्रो सम्बन्ध छ । सांस्कृतिक रुपमा के हो भन्दा घरका सबैभन्दा मान्यजनलाई सम्झिने,चिरायु होस्,सोचेका कामहरु पूरा होस् भनेर आर्शिवाद दिने यो हाम्रो संस्कृति हो । यो हाम्रो पर्व हो संस्कृति । यसले गर्दा सांस्कृतिक रुपमा,धार्मिक रुपमा भगवान बुद्धसंग जोडिएको,काठमाडौंमै बौद्ध र स्वयम्भू निर्माणका कुराहरु यहि संवत्अनुसार जोडिएका । भनेपछि यो ऐतिहासीक रुपमा परापूर्वकालदेखि तामाङहरुको पूर्खाको इतिहास हेर्दापनि चीनको पहेंलो नदि उत्पत्तिका कुराहरु जोडिएका कारण यो ल्होछार सामान्य रुपमा ल्होछार मात्रै हो भनेर भन्न मिल्दैन । तामाङको इतिहास,धार्मिक,सांस्कृतिक महत्वका कुरा र तामाङमा परापूर्वकालदेखि मान्दै आएको संस्कृतिमा बाउबाजेलाई मान्ने परम्परा यसैमा जोडिएका छन् । यसले गर्दा ल्होछार भनेको सामान्य साल फेरिएको,वर्ग फेरिएको नयां वर्ष भनेर मात्रै भन्न खोजिएको हो भने त्यो मात्रै हैन । तामाङका धेरै कुराहरु यसैमा जोडिएर आउछ ।
बुझ्नेगरी छोटकरीमा भन्नुपर्दा ल्होछार कसरी मनाउने ?
मैले यो भन्दा पहिले पनि भनिसकेको छु । हामीले सांस्कृतिक महत्वका साथ मनाउदै आएका छौं । पहिलादेखि जसरी मनाउदै आएका छौं । त्यसलाई बैज्ञानिक रुपमै मनाउदै जाने । ल्होछारको पूर्वसन्ध्यादेखि ल्होछारको भोलिपल्ट सम्म मनाउने चलन छ । जस्तै पूर्वसन्ध्यामा घर,गाउं,बाटो,पंधेरो सरसफाई गर्ने । सबै मिलेर वर्षमा एकपटक भएपनि गाउंका सार्वजनिक स्थलहरु समेत सफा हुने भयो । को कहां को कहां हुन्छुन्,कम्तीमा वर्षमा एकपटक मान्यजनबाट चिरायुको आर्शिवाद पाउने । यो भन्दा पहिले केहि नराम्रा कामहरु गरेको भए समिक्षा गर्ने,त्यस्तो कमजोरी गल्ती नगर्ने प्रण गर्ने ।
हिजो झगडा भएपनि अब भोलिदेखि मिलेर जाने भन्ने कुरा पनि सिकाउंछ । यो ल्होछारचाहिं पर्व मात्रै हैन । यसले धेरै कुराहरु सिकाउंछ । जस्तै एउटा कुरा कपडा बुन्दैछ तानमा,सकिएको छैन भने बेलैमा सकिएन,अब अर्को वर्षलाई अधुरो काम सार्नुहुन्न भनेर त्यतिमै काट्ने चलन छ । केहो भन्दा पहिलाको राम्रो भएपनि नराम्रो भएपनि विर्सनु अब नयां काम सुरुवातमा ध्यान देऊ भन्ने कुरा पनि देखाउंछ । यसैले गर्दा ल्होछारचाहिं मान्नका लागि मान्ने कुरा हैन । ल्होछारको आफ्नै खालको महत्व छ,हामी तामाङलाई तामाङ भनेर चिनाउने महत्वपूर्ण कुराहरु जोडिएर आएका छन् ।
ल्होछारमा खाना संस्कृति के छ ?
ल्होछार,यो माघ महिना भएकोले जाडो समय हो,यो बेला हाम्रा शरीरलाई तातो बनाउने बनतरुल जस्ता कन्दमुल,फलफूल खाने चलन छ । यसले गर्दा खासगरी बनतरुल,भ्याकुर,शेर्पा तरुल,पाल्दुर तरुल भयो । सिमल तरुल,फापरको पानीरोटी भयो । यसले शरीरलाई न्यायो बनाउने तताउने गर्छ । यि खानेकुराहरु खाने चलन पनि छ ल्होछारमा ।
ल्होछारमा लामा,गान्बाहरुको भुमिका के हुन सक्छ ? जस्तै गुम्बाहरुमा पुजापाठ हुने,घरमा लुङदार राख्ने चलन पनि देखिन्छ ।
यो हाम्रो बौद्ध धर्मको चलनअनुसार वर्ष समाप्त भएपछि केहि नराम्रो होला कि ? जस्तै अहिले लाङ ल्हो वर्ष छ र नयां आउने च्यान(वाघ) ल्हो छ, यसमा पात्रो हेर्दा कसैलाई अशुभ हुने केहि कुरा छ भने लामाहरुलाई बोलाएर ग्याप्सी भनेर ग्याप्सी दशा ग्रह फाल्ने चलन छ । लामालाई नै बोलाएर लहोछारको सुरुवातमै नयां लुङदार फेर्ने चलन पनि छ । त्यस्तै गुम्बाहरुमा गएर दिवंगत भएका पूर्खाहरुलाई सम्झेर ङोवा गर्ने चलन पनि रहेको छ । यो ल्होछार मान्ने बेला ठाउंठाउंमा लामा ह्रेम्पोछेहरुलाई सम्मान गर्ने,दर्शन गर्ने चलन ल्होछार संस्कृतिभित्र जोडिएर आउंछ ।
धेरै धेरै धन्यवाद,ल्होछार परम्परा,इतिहास र मान्यताका विषयमा भलाकुुसारीमा सहभागि भएर महत्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो ।
तामाङहरुमाझ संस्कृति प्रवद्र्धनमा जागरणमूलक,सन्देशमूलक काम गर्ने त्यस सञ्चारमाध्यमले ल्होछारको बारेमा केहि कुरा राख्न दिनुभएकोमा यहांहरुलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद ।
भिडियो अन्र्तवार्ता हेर्नुहोस् :